ဘုရင့်နောင်ဈေး - ဝီကီပီးဒီးယား
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၁၁၀၆၂၊ ရန်ကုန်မြို့
16°51′59″N 96°06′26″E﻿ / ﻿16.86639°N 96.10722°E﻿ / 16.86639; 96.10722ကိုဩဒိနိတ်: 16°51′59″N 96°06′26″E﻿ / ﻿16.86639°N 96.10722°E﻿ / 16.86639; 96.10722
ဘုရင့်နောင်ဈေးသည် ရန်ကုန်မြို့၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လယ်ယာထွက်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချရာ ကုန်စည်ဒိုင်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရင့်နောင်ဈေးကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နှစ်ထပ်အဆောက်အဦများဖြစ်ကာ ကြမ်းပြင်အကျယ်သည် ၁၂၀၀ နှင့် ၂,၄၀၀ စတုရန်းပေ (၂၂၀ စတုရန်း မီတာ) ရှိသည်။ ဘုရင့်နောင်ဈေးသည် အစိုးရ၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပဲအမျိုးမျိုးကို လက်ကားရောင်းချရာ တခုတည်းသောနေရာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားသို့ ပဲတင်ပို့မှုသည် ၁.၃၄ မီလီယံတန်ရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀ မီလီယံရှိသည်။
မတ်ပဲသည် အဆိုပါဈေးတွင် အဓိကတင်ပို့သော ပဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် မတ်ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲစင်းငုံ စသော ပဲ တန်လေးထောင်ခန့်သည် နေ့စဉ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ဖြစ်နေသည်။ ထို့ပြင် ဘုရင့်နောင်ဈေးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသအသီးသီးသို့ ငပိငါးခြောက်များကို အဓိက လက်ကားရောင်းချရာ နေရာကြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရင့်နောင်ဈေးကို အင်တာနက်အခြေပြု ကုန်သွယ်မှု သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်၏ ဗဟိုအဖြစ် ဆောက်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုန်စည်ဒိုင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားကာ ဈေးနှုန်းတသတ်မှတ်တည်း တည်ငြိမ်စေရန် နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းများနှင့်အညီ ရောင်းချရသော ကုန်စည်ဒိုင်ကြီးအဖြစ် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုန်စည်ဒိုင်များသည် တယ်လီဖုန်းများဖြင့်သာ ချိတ်ဆက် ရောင်းဝယ်နေကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဘုရင့်နောင်ဈေး၌ ပြည်တွင်းဈေနှုန်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြသသော စနစ်တစ်ခု ရှိလာခဲ့သည်။ ဆီထွက်သီးနှံအမျိုးမျိုး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ အားလူး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့၏ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းများကိုလည်း မကြာမီ ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်းသည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမှ အရောင်းအဝယ်များအားလုံးကို ဘုရင့်နောင်ဈေးတွင်သာ အပြီးသတ်ပြုလုပ်ရန် လိုလားခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ဇော်ထက်နှင့် မေသန္တာဝင်း (၂၀၀၆-၀၉-၀၄). "Market reforms lead to Bayintnaung boom". မြန်မာတိုင်း(မ်).
↑ ရီရီထွေး (၂၀၀၈-၁၀-၀၆). "Bank, exporters gamble on higher prices". မြန်မာတိုင်း(မ်).
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ သိုက်ဇင် (2009-08-31). "Beans and pulses markets level out". မြန်မာတိုင်း(မ်).
↑ တင်မိုးအောင် (၂၀၀၇-၀၄-၀၉). "Beans and pulses traders anticipate export price rise". မြန်မာတိုင်း(မ်).
↑ ၅.၀ ၅.၁ ထင်ကျော် (၂၀၀၈-၀၉-၀၈). "No completion date set for comms trading network". မြန်မာတိုင်း(မ်).
↑ ၆.၀ ၆.၁ ထင်ကျော် (၂၀၀၈-၁၀-၀၆). "Bayintnaung launches E-information system". မြန်မာတိုင်း(မ်).
Burma Markets Information Daily
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘုရင့်နောင်ဈေး&oldid=384190" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၄:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။